Baaqyo nabadeed oo loo dirayo Xiisado Colaadeed oo ka soo cusbnoonaaday G/Karkaar – SBC
Baaqyo nabadeed oo loo dirayo Xiisado Colaadeed oo ka soo cusbnoonaaday G/Karkaar
Ururada bulshada, kuwa Maxaliga, Waxgaradka, iyo nabadoona gobolada Karkaar iyo Bari ayaa baaq ka soo saaray xiisado colaadeed oo ka taagan qeybo ka mid ah gobolka Karkaar Puntland.
Waxaa sii kordhaya Baaqyada laga soo saarayo sidii loo joojin lahaa xiisadaha dagaal ee ka soo cusboonaaday qeybo ka mid ah gobolka Karkaar, halkaasi oo ay isku hayaan laba maleeshiyo beeleed oo wada dega tuulooyinka ku xareereysan degmada Rako ee gobolkaasi .
Cabdi Nuur Bakeyle waa Madaxa Hay’ada Maxaliga ah ee Home Peace , waxaanu baaq ka diray arinta dagaalada sokeeye ee ka soo cusboonaaday gobolka Karkaar,
Waxa uu Cabdi Nuur sheegay in ay ku baaqayaan ka urur Ahaan in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu joojiyo dagaalada labadaasi beelood ku dhexmaraya Aaga degmada Rako islamarkaana ay dhacdo in wada hadal la isugu yimaado oo miiska wada hadalka la isku afgarto.
Waxa uu sidoo kale sheegay Cabdi in Beelaha dagaalamaya ay iyagu kaskooda ka shaqeeyaan sidii ay u joojin lahaayeen dagaalada Soconaya, waxaanu u jeediyay Odayaasha iyo dhamaan waxgaradka in ay u guntadaan sidii ay u dhax dhaxaadin lahaayeen dadkaasi, ayna ka urur ahaan iyaga dhankooda diyaar la yihiin taakulo intii loogaga baahdo waasida uu hadalka u dhigaye.
Dhinaca kale Suldaan C/laahi Jeynyacad waxa uu ka mid yahay Isimada Deegaanada Puntland, waxaanu dhankiisa baaq ka soo saaray colaadan ka oogan qeybo ka mid ah gobolka Karkaar .
Isinka waxa uu sheegay in uu ugu baaqayo labada dhinac ee dagaalamaya sida ugu dhaqsiyaha badan in ay u joojiyaan xabada isuguna yimaadaan miiska wadahadalka si lookala garqaado nin walba waxa uu tabanaayana uu u soo bandhigto .
“Meelaha ay colaaduhu ka jiraan oo dhan waxaan u dirayaa Baaq nabadgeliyo, Dalku dadku waa ku filanyahay ee Nabad haloodaayo, umaduna Ilaaheed haloodaayo” ayaa ka mid ahaa hadaladii Suldaan C/laahi Jeynyacad
Sikastaba ha ahatee maalin nimadii shalay ayay ahayed markii uu dagaal xooglihi ku dhexmaray deegaano hoosyimaada Degmada Rako labadan beel ee walaalaha ah kaas oo sababay khasaare naf iyo m aalba leh, iyadoo la soo sheegayo in dagaalkaasi ay ku geeriyoodeen dad ka badan 6 qof halka dhaawacuna uu intaasi ka badanyahay.